समूहमा बार्गेनिंग गर्छन् अभिकर्ताहरु – Insurance Khabar
Unicode to Preeti Preeti to Unicode Premium Calculator Policy Bonus
(Jul 2, 2022)
समूहमा बार्गेनिंग गर्छन् अभिकर्ताहरु
प्रकाशित मिति : ३० बैशाख २०७६, सोमबार १६:२१
बीमा अभिकर्ताहरुले बीमा कम्पनीसँग व्यवसायको लागि सामूहिक रुपमा नै बार्गेनिंग सुरु गर्न थालेका छन् । अभिकर्ताहरुले निश्चित व्यवसायको रकम तोकेर निश्चित कमिशन दिनुपर्ने माग राख्दै बार्गेनिंग गर्न थालेको एक बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए ।
नेपालको बीमा बजारमा नयाँ कम्पनीहरु सञ्चालनमा आएसँगै अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न थालेको छ । यही मौका छोपी अभिकर्ताहरुले पनि कम्पनीसँग बार्गेनिंग गर्न थालेका हुन् । आफुहरुले ल्याएको व्यवसायको ५० प्रतिशत कमिशन दिनुपर्ने भन्दै एक अभिकर्ताको समूहले बार्गेनिंग गरेको उनले बताए । अभिकर्ताहरुमा देखिएको यस्तो खालको प्रवृतिले बजारमा विकृति ल्याउँने उनले बताए ।
बीमा समितिले बीमा व्यवसाय ल्याए बापत अभिकर्तालाई कमिशन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कमिशनको लागि समितिले नै निश्चित प्रतिशत तोकेको छ । त्यस्तै, समितिले कम्पनीहरुको अभिकर्तालाई इन्सेन्टिभ पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै कम्पनीहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका उपहार र प्याकेजका सुविधा पनि अभिकर्तालाई दिदै आएका छन् । यसका अतिरिक्त पनि अभिकर्ताहरुले कम्पनीहरुसँग व्यवसायको बार्गेनिंग सुरु गरेका छन् ।
नयाँ कम्पनीहरुमा अभिकर्ताहरुले यस्तो खालको बार्गेनिंग गर्ने गरेको लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपालकी सिनियर एजेन्सी म्यानेजर संजिता भक्तराजले बताईन् । यो प्रवृति गलत हो । यसले भोलिका दिनमा बीमा क्षेत्रमा नकरात्मक असर देखाउँने उनले बताईन् । नयाँ कम्पनीहरुलाई व्यवसाय बढाउँने चुनौती छ । त्यसको मौका छोपी अभिकर्ताहरुले बार्गेनिगं गर्न थालेको उनले बताईन् ।
निक्षेपको लागि पनि बीमाको बार्गेनिंग
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बीमा व्यवसाय दिने भन्दै बीमा कम्पनीसँग निक्षेपको लागि बार्गेनिंग सुरु गरेका छन् । निश्चित रकम निक्षेप राखेको अवस्थामा बैंकास्योरेन्स मार्फत बीमा व्यवसाय दिने भन्दै बैंकहरुले बार्गेनिंग गर्न थालेको एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बताए । एउटा कम्पनीमा बार्गेनिंग गरेपछि सोही बंैक तथा वित्तीय संस्थाले अर्को कम्पनीमा पनि बार्गेनिंग गर्न थालेको उनले बताए । “केही समय त हामीले यस्तो प्रेसरलाई वेवास्ता गरेका थियौ । तर, निक्षेप नराखेसम्म व्यवसाय नै नदिने भएपछि हामी पनि बाध्य भयौ,” उनले भने ।
एनआईसी एशियाको डिजिटल बैंकिङ सेवा टेलिकमको नेटवर्कमा निःशुल्क चलाउन सकिने
भारतमा ट्रक चालकको अनिवार्य बीमा गर्न मानव अधिकार आयोगले दियो निर्देशन
सातामा नेप्से सूचक १६६ अंकले बाउन्स व्याक, के अव घट्ने क्रम रोकिएको हो ?
आर्थिक मन्दीले जीवन बीमाको बृद्धिदर खुम्चियो, निर्जीवन बीमा कम्पनीको उल्लेख्य सुधार
जीवन बीमकमध्ये पहिलो सहमति गरेका प्राइम,गुराँस र यूनियन लाइफको मर्जर प्रकृया कहाँ पुग्यो ?
बैंकिङ प्रणालीमा ऐतिहासिक दिन ! ५० खर्ब पुग्यो निक्षेप, सीडी रेसियो पनि सहज हुँदै
सूर्या र ज्योति लाइफका अध्यक्षले गरे मर्जरको सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर, मर्जर पछि यस्तो बन्नेछ कम्पनी
बीमाशुल्क आम्दानी झण्डै १७ प्रतिशतले बढ्दा नेपाल लाईफ सहित पाँचवटा कम्पनीको बजार हिस्सा खुम्चियो
सबैले पार्टनर खोज्दा म एक्लै हिड्छु भन्न नसकिने भयो, प्रभु लाइफका सिइओ प्रसाईसँगको अन्तर्वार्ता
सूर्या र ज्योति लाइफ विच मर्जरको सहमति, आज साँझ सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुँदै
बैदेशिक रोजगार बाहेक प्रथम बीमा शुल्क २ अर्ब ३७ करोड, प्रभु लाइफ सर्वाधिक आक्रामक (बजार हिस्सा कसको कति)
जेठ महिनासम्ममा जीवन बीमाको कुल बीमा शुल्क आर्जन एक खर्ब १९ अर्ब नाघ्यो, कुन कम्पनीको कति (सूचिसहित)
सिम्लेमा माछापुच्छ्रे बैंकले संचालनमा ल्यायो १६५औं शाखा
फोन: 01-5907483, 9851170483
विज्ञापनको लागि: 9851334292
insurancek[email protected] (for admin)